ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ တာဝန်ကျေပြီလား … (မိုးမခ) မေ ၁၅၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ Related posts ကာတွန်း ညီထွေး – ခေတ်သစ် ဝေါဟာရများ (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းနေသူတွေ … (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ လေထဲပျောက်ကုန်ပါဦးမယ်ကွာ …. (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ တွေ့ပြီပေါ့ကွာ … (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ အတိုးနည်းအိမ်ယာမဟုတ်ရပါ (0)
ဆောင်းယွန်းလ ● ဒီလိုနဲ့ နောက်တနွေအေးစက်နေခဲ့ခြင်း (မိုးမခ) မေ ၁၅၊ ၂၀၁၈ အေးစက်နေပုံက ရေခဲတိုက်ထဲဝင်နေရသလိုပဲလို့ ပြောရအောင် လူသေကောင်ဟာ အသံတိတ်အိပ်ပျော်သွားတာကိုများ စားစားသွားသွား ဒီစိတ်နဲ့ စုတေခဲ့ရ အငွေ့နဲ့ အားအင်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဘဝတွေ ဆုတောင်းခြင်းကို သီချင်းကောင်းကောင်းစပ်နိုင်ရင် ဂရမ်မီဆယ်ထပ်ကွမ်းချိတ်နိုင်မယ် အိပ်မက်က နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး မီးမပါပဲထိုးပြနေတဲ့ ပြဇာတ်ပဲ လမ်းတွေက ငွေနောက်တကောက်ကောက်လိုက်တော့ ရပ်ထဲရွာထဲ ပြုပြင်ဆဲစကားလုံးတွေကြေမွလို့ ကိုယ့်အဖို့ မျက်ရည်နဲ့ သူ့အတွက် သယံဇာတမှာ ပို့သူမဲ့ ဈာပနတွေ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ နှစ်နှစ်လောက်ပေါက်ရုံလောက်နဲ့ ကမ္ဘာကီးကိုနောက်ယောင်ခံမလိုက်နိုင်မှန်းလည်း အရိပ်ပြရုံလောက်နဲ့ အကောင်ထင်ပါတယ် အခုလည်း နွေတကျော့ပေါက်လာပြန်ပေါ့ ဗွက်ပေါက်လိုက် ဖိနပ်ပျောက်လိုက်နဲ့ အင်အားဖြစ်မလာခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေအောက်မှာ သင်ကြားစရာ ကျောင်းအသစ်ကိုရှာရင်း သံခြေကျင်းနဲ့ မွေ့လျော်ကြရ အမတ်ပြောင်းခြင်းနဲ့သေနတ်ပြောင်းရင်းမှာ ဘဝကို...
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ – ၁၉၈၀) – အပိုင်း (၇၂) (မိုးမခ) မေ ၁၅၊ ၂၀၁၈ ● အစိုးရတပ်ဖွဲ့များ အင်အားအခြေအနေ (၁၉၇၇ ခုနှစ်) ၁၉၇၇ ခုနှစ်ပိုင်းတွင် ဦးနေဝင်းသည် မဆလပါတီနှင့် အစိုးရပိုင်းတွင် ပြောင်းလဲတာဝန်ယူထားသော်လည်း တပ်အားကောင်း စွာထိမ်းချုပ်ကိုင်တွယ်ထားနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ ထိုစဉ် တပ်၏ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ထင်၊ ဒုဦးစီးချုပ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အေးကိုဖြစ်သည်။ CPB အပါ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရန် ၁၉၇၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် နှင့်သြဂုတ်လအတွင်းက စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော စစ်တိုင်းဌာနချုပ် ၉ ခုရှိပြီး တိုင်းမှူးများမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်များဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စစ်တိုင်းဌာနချုပ် ၉ ခုမှာ ၁။ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (မပခ)၊ မြစ်ကြီးနား။...
ကိုအောင်မှိုင်း – ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက် မြန်မာ့တပ်မတော် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား
Daw Aung San Suu Kyi with military officials at the swearing-in of President U Htin Kyaw, 30 March 2016 ကိုအောင်မှိုင်း – ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက် မြန်မာ့တပ်မတော် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား (မိုးမခ) မေ ၁၅၊ ၂၀၁၈ အပိုင်း (၁) မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သေရေးရှင်ရေးတမျှအရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းကတော့ “ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက် မြန်မာ့တပ်မတော် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား”ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြာလေလေ ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာလေ မြင်နေရတာကတော့ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ ကနေ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာ ဘေးတိုက်ဖြစ်နေတာ အထင်အရှားဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ ရှေ့ကသွားဘို့ ဆိုတာကတော့ လူထုရဲ့  ဆန့်ကျင်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံနေရသလို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလဲ လူထုဆန့်ကျင်ရေးကို...
စမ်းစမ်းတင် – စတုန်းက စိတ်ကူးကောင်း – နောက်မှ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်း (မိုးမခ) မေ ၁၅၊ ၂၀၁၈ အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာဆိုပေမဲ့ အစလည်းကောင်း၊ အသုံးလည်းတကယ်တည့်ပေမဲ့ ကြာလေလေပြဿနာကြီးလာလေလေက ပလတ်စတစ်၊ ခုထိလည်း ပလတ်စတစ်ကင်းစင်စေမယ့် ဇာတ်သိမ်းခန်းက မရောက်နိုင်သေးဘဲ ပလတ်စတစ်အမှိုက်ကိစ္စနဲ့ ကမ္ဘာက ခေါင်းခဲနေတုန်း၊ ဗမာပြည်မှာတော့ ပြောမနေနဲ့တော့ ကိန်း၊ ဇီဝနည်းနဲ့ ရက် ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း ဆွေးမြေ့သွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းတော့ ဖော်ထုတ်နိုင်လို့ တချို့က သုံးတောင်သုံးနေပြီ၊ ဒါပေမဲ့ ဗမာပြည်ကို ဘယ်ရောက်နိုင်ပါ့အုန်းမလဲ၊ အမေရိကားမှာတောင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစားပေးတဲ့ ကုန်မျိုးစုံဆိုင်တိုင်းတောင် မသုံးနိုင်သေး၊ ပလတ်စတစ်နိဒါန်း တကယ်တော့ ပလတ်စတစ်ဟာ ကမ္ဘာတလွှားရှင်းလို့မနိုင် နိုင်တဲ့ အမှိုက်တွေထဲ ရှေ့ဆုံးကနေရာယူနေပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို...
စာပေ အနုပညာသတင်းနဲ့ လှုပ်ရှားမှုများ (မေတတိယပတ်) K (မိုးမခ) မေ ၁၅၊ ၂၀၁၈ ငြိမ်းချမ်းရေးကဗျာရွတ်ပွဲများ – မေ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀ မြန်မာပြည်အနှံ့ ကျင်းပမည် နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားနေသော ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ထိုးစစ်များရပ်ဆိုင်းရေးနဲ့ စစ်ဖြစ်ပွားရာ နယ်မြေများအတွင်း ပိတ်မိနေသော ပြည်သူများလွှတ်ပေးရေးအတွက် တောင်းဆိုပွဲနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကဗျာရွတ်ဆိုပွဲများကို မြန်မာနိုင်ငံ မြို့ကြီးတော်တော်များများမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းရေးတောင်းဆိုမှု ကဗျာရွတ်ဆိုမှုများကြောင့် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုများအပြင် ဖမ်းဆီးထောင်ချမှုများကိုလည်း အာဏာပိုင်များက ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ မေလ ၆ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့ကျုံးဘေးမှာ ပြုလုပ်ခဲ့သောငြိမ်းချမ်းရေး တောင်းဆိုကဗျာရွတ်ဆိုပွဲများတွင်လည်း ကဗျာ ဆရာ ကလင့်(မန္တလေး)အပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူများကို ဖမ်းဆီး ထောင်ချနေပြီး မေလ ၁၂ ရက်နေ့က ရန်...
၀င်းအောင်ကြီး (မောင်အောင်မွန်) – ပန်းချီဆရာ ပြည်တွင်းစစ်နှင့် ၀န်ကြီးချုပ်
၀င်းအောင်ကြီး (မောင်အောင်မွန်) – ပန်းချီဆရာ ပြည်တွင်းစစ်နှင့် ၀န်ကြီးချုပ် ကျွန်တော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၂၄၁) (မိုးမခ) မေ ၁၅၊ ၂၀၁၈ (၁) ၁၉၇၅ ခု၊လောက်တွင် ပန်ချီဆရာကြီး ဦးစန်းလွင်က ကျွန်တော်နှင့်တွေ့ဆုံလိုကြောင်း ဖိတ်ကြား၍ သူနေရာ ရေကျော် ဇီဇ၀ါလမ်းသို့ ရောက်သွား၏။ သူ့သား ကိုမျိုးညွန့် (ကဗျာဆရာ မိုးကြည်လွင်) ပညာသင်အဖြစ် ဆိုဗီယက်ယူနီယံတွင် ကျွန်တော်နှင့် ရင်းနှီးခဲ့ပါသည်။ ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်းပါ မောင်အောင်မွန်၏ ၀တ္ထုများကိုလည်း ဆရာကဦးစန်းလွင်က သရုပ်ဖော်ပုံများ ရေးဆွဲပေးဖူးသော်လည်း လူချင်းဆုံခွင့်မကြုံခဲ့ပါ။ (၂) ဆရာ့အလုပ်ခန်းမှာပင် စားသောက်ဖွယ်ရာ ပြင်ဆင်ကာ နှစ်ယောက်သား ထိုင်ဖြစ်ကြ၏။ ဆရာဦးစန်းလွင်ထံ ပုံအပ်လျှင် ကြာသော်လည်း စေ့စပ်သေချာသည့် ပုံကောင်းရ ကြောင်း ရှုမ၀က ဦးမြရှင် ပြောပြသည်ကို...
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● ကျွန်တော်နှင့် ဘယ်သူ့လက်ထဲမှာ အာဏာရှိသလဲ (မိုးမခ) မေ ၁၄၊ ၂၀၁၈ ယခုလပိုင်းတွင် ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်လာပြီး ဆန္ဒပြပွဲအများစုမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စစ်ပွဲများ ရပ်တန့်ပေး ကြဖို့ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကို တောင်းဆိုဆန္ဒပြကြခြင်းဖြစ်ကာ ဓါးမဦးချ ဘိုးဘွားပိုင် မြေ ယာများအတွက် သီလဝါဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုန်တွင် ဖြစ်ပွားကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဆန္ဒပြပွဲများကို တားဆီးခြင်း ပိတ်ပင်ခြင်း ဖမ်းဆီးခြင်းများရှိခဲ့ပြီး သီလဝါတွင် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးနှိမ်နှင်းမှုများအထိ ရှိခဲ့သည်။ ထိုဆန္ဒပြပွဲများကို တားဆီးပိတ်ပင်နေရသည့် ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ပြည်သူလူထုတို့က တင်မြှောက်ရွေးကောက်ထား သော ပြည်သူ့အစိုးရက စီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ရှိသလား ပြည်ထဲရေးဌာနက စီမံခန့်ခွဲရန် တာဝန်ရှိသလား ပြည်သူ့တပ်မတော် က စီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ရှိသလားဆိုတာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းက သိနားလည်ထားသည့် အရာတခုရှိ သည်မှာ ပြည်သူလူထုတို့က စုပေါင်းထည့်ဝင်ထားသော အခွန်ငွေများက ပေးချေနေသော ...
နီလာမိုးဆွေ ● နိဂုံးတစ်ခု၏ နိဒါန်း (မိုးမခ) မေ ၁၄၊ ၂၀၁၈ ကြိုးတန်းပေါ်လမ်းလျောက်နေရသူအဖို့ အကြိမ်ကြိမ်တိုက်လာတဲ့ ဦးခေါင်းတွေက အက်ရာပြုလာတဲ့ စိတ်နံရံအတွက် နိစ္စဓူဝ အနတ္တတရား … အနိစ္စကို တွင်တွင်ရွတ် ခြေကားယား လက်ကားယား ကကြိုးရှုတ်နေသူတွေကြား အကြိမ်ကြိမ်ဦးချမိတဲ့ ဘုရားသခင်ဆိုတာ မှ … တပါး အခြားမရှိ … ဆေးထိုးပြီးမှည့်နေတဲ့ ရာသီပေါ်တွေကြား သက်ရှိဘုရားက ကွယ်ပျောက် အမှန်တရားဆိုတာက ရေများရာအရပ်မှာသာ ပွင့်လေကုန်သောအခါ … အဆူဆူ ပွင့်လာကုန်ကြတဲ့ ဘုရားငယ်တွေကြား ငါ့၏ ဦးခေါင်း …. ဘယ်တော့မှ မရွေ့ ဘယ်တော့မှ ဦးမညွှတ် ….။ ။ နီလာမိုးဆွေ Tags: နီလာမိုးဆွေ Related posts နီလာမိုးဆွေ...
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● အရှေ့တောင်အာရှ အင်ပါယာ (မိုးမခ) မေ ၁၄၊ ၂ဝ၁၈ အသက် ၉၂ မဟာသီယာ မလေးရှား အဂတိအစိုးရခေါင်းဆောင် သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ပါတီကို ပြန်ဖြုတ်ချတဲ့ အဖြစ်အပျက် ကတော့ အံ့သြဘွယ် မဟာသီယာဆိုပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်ပဲ အံ့သြစရာပါ။ ကိုယ်တည်ထောင်တဲ့ စနစ်တစ်ခုကို ပြန်ပြီးကယ်တင်ရပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဒါမျိုး မရှိဖူး မဖြစ်ဖူးပါဘူး။ မြန်မာပြည် အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးဆိုရင် စင်ကာပူရောက် မြန်မာတွေက အရမ်းတက်ကြွတယ်။ မြန်မာပြည်ကလူတွေက ယဉ်ကျေးမှုလို ဖြစ်နေတယ်။ စင်ကာပူက တပတ်ခွင့်ယူပြီး မြန်မာပြည်ပြန်လာ မှတ်ပုံတင်လုပ်ရင် ဝန်ထမ်းတယောက်ကို အိမ်သွားပြီး (မိမိစင်ကာပူနေကြောင်း မသိစေပဲ ဝေးလံတဲ့ နယ်မှာနေတဲ့ သာမန်လူလို) အကူညီတောင်းရင် တနာရီအတွင်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ရုံးမှာရှိရမယ်...
ကာတွန်း ဂျိစံရဲ့ သင်ပေးမယ့် လက်မှုပညာ
ကာတွန်း ဂျိစံရဲ့ သင်ပေးမယ့် လက်မှုပညာ (မိုးမခ) မေ ၁၄၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ဂျိစံ Related posts ကာတွန်း ဂျိစံရဲ့ အချိန်တသူတွေ (0) ကာတွန်း ဂျိစံ ● မြည်းကြည့်ပါလား … (0)
နေစိမ့် – ဆေးမင်ကြောင်
ဆေးမင်ကြောင် နေစိမ့် (မိုးမခ)၊ မေ ၁၃၊ ၂၀၁၈ ပွင့်လင်းရာသီမရောက်ခင် ဒိုင်းတွေဆင်တယ် မြားတွေချွန်တယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးခေါင်းစဉ်အောက် နှစ်ဦးသဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ပြီးတာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးညစာ စားကြပြီ။ စစ်ပွဲတပွဲ ယမ်းငွေ့တိတ်သွားရင် သမိုင်းကရေးသွားတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ အမှားပြင်ဆင်ချက်ထုတ်လို့ မရတော့ဘူး။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ATH ရဲ့ ဖော်ရဲရင် ဖော်ကြည့်လေ … (မိုးမခ) မေ ၁၂၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကိုသန်းလွင် – လစ်ဘရယ်ဝါဒ ကျဆုံးချိန်
ကိုသန်းလွင် – လစ်ဘရယ်ဝါဒ ကျဆုံးချိန် (မိုးမခ) မေ ၁၂၊ ၂၀၁၈ (၁) လာမည့်တနင်္ဂနွေနေ့ (၈.ဧပြီလ.၂၀၁၈) တွင် ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာအော်ဘင် (Mr.Victor Orbin) သည် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ်စတုတ္တအကြိမ် အရွေးခံမည်ဖြစ်သည်၊ မစ္စတာအော်ဘင်သည် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ၏ ဒီမိုကရက်တစ်အသင်းအဖွဲ့များကို အင်အားချိနဲ့အောင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သူဖြစ်သည်၊ သူ့ကို စစ်ဆေးနိုင်သော အဟန့်အတားလုပ်နိုင်သော (Check and Balance) အဖွဲ့မှန်သမျှရပ်တည်ခွင့်မရ၊ မီဒီယာများကို လည်း အစိုးရ နှင့် နီးစပ်သည့် ငွေကြေးချမ်းသာသူများ (Oligarch) နှင့် ထိမ်းချုပ်နိုင်အောင် ကျိုးစားသည်။ ၂၁ရာစု တောင်းဆိုချက်များကို အမှီလိုက်နိုင်ရန်ဆိုခါ သူ၏နည်းနာများကို ၀ါဒဖြန့်ခဲ့ရာ သူချီတက်ရသည်မှာ (illiberal Democracy) ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ (၂)...
သခင်အုန်းမြင့်နဲ့ ဦးဝင်းတင် (၂၀၀၉ခုနှစ်) ဒေါ်ခင်မျိူးချစ်ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၀နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေးမှာ အတူ တွေ့ခဲ့ရစဉ် (မိုးမခ) မောင်စွမ်းရည် – သခင်အုန်းမြင့် ရာပြည့်ပွဲ နွှဲခဲ့ရတယ် (မိုးမခ) မေ ၁၂၊ ၂၀၁၈ သခင်အုန်းမြင့်ကို ၁၉၁၈၊ ဧပြီ ၂၈ ရက်မှာမွေးတယ်။ သူ့မွေး ရပ်က လက်ပံတန်းတဲ့။ ၁၉၃၄ မှာ လက်ပံတန်းအစိုးရအထက်တန်း ကျောင်းက ဆယ်တန်းအောင်တယ်။ လက်ပံတန်းကျောင်းမှာ သူနဲ့ အရင်းနှီးဆုံးဆရာက ဦးချစ်မောင်။ နောင်အခါ ဂျာနယ်ကျော်ဦး ချစ်မောင်လို့ နာမည်ကျော်တဲ့ သတင်းစာဆရာကြီးပေါ့။ သခင်အုန်းမြင့်ဟာ ၁၉၁၈ မှာ မွေးဖွားသူဆိုတော့ ၁၉၁၅ မွေးတဲ့ သခင်အောင်ဆန်းက သူ့ထက် ခုနစ်နှစ်ကြီးတာပေါ့။ သခင် အုန်းမြင့်ဟာ သခင်အောင်ဆန်းနဲ့ တို့ဗမာအစည်းအရုံးမှာ နိုင်ငံရေး...
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဘတို့ ဆေးရုံ
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဘတို့ ဆေးရုံ (မိုးမခ) မေ ၁၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း OKKW Related posts ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ခေတ်နှစ်ခေတ် (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဖျားရှူးနေတယ် … (0) ကာတွန်း okkw ရဲ့ တာဝန် (0) ကာတွန်း okkw ရဲ့ ငါလွှတ်ပေးတာ သူတို့မသိ … (0) ကာတွန်း OKKW ● မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ဒီမိုကရေစီ (0)
ဇင်လင်း ● အဂတိလိုက်စားမှုများနှင့် တရားစီရင်ရေးပြဿနာ (မိုးမခ) မေ ၁၁၊ ၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ တရားစီရင်ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် မည်သည့် အခြေအနေ ရောက်ရှိနေသည်ကို ယနေ့ ပြည်သူအများစု သိရှိနေကြသည်။ ငွေများတရားနိုင်ဆိုသည့် ခေတ်အတွင်းမှ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ရုန်းမထွက်နိုင်သေး။ သို့သော် လက်ရှိ NLD အစိုးရ သက်တမ်း ၂ နှစ်ကျော်လာချိန်တွင် အကောင်းဘက်သို့ ပြောင်းနိုင်သည့် အလားအလာ တချို့တွေ့လာရသည်။ တရားသူကြီးများအပါအ၀င် တရားရေးဝန်ထမ်း ၁၆၀ ဦးကို ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းက အရေးယူခဲ့သည်ဟု ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့် သုတေသနဌာန လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်ထွန်းက ပြောကြောင်း မဇ္ဈိမသတင်း၌ ဖေါ်ပြသည်။ အရေးယူထားသည့် ၀န်ထမ်း ၁၆၀ ဦးတွင်...
ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ ပြောင်းလည်း ပြောင်းပြောင်းပါပဲ (မိုးမခ) မေ ၁၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ကိုခေတ် Related posts ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ အာစိတို့ကြိုက်တဲ့ကား (0) ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ ဟိုပူရ သည်ပူရ (0) ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ လူသားဆန်တဲ့ အမှု (0) ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ ဆင်တွေ၊ ဆိတ်တွေ၊ ပုရွက်ဆိတ်တွေ … (0) ကာတွန်း ကိုခေတ် ● နှစ်သစ်ဆီသို့ … (0)
ကာတွန်း မင်းထက်လူ – မေးခွန်သတ်ပြီ
ကာတွန်း မင်းထက်လူ – မေးခွန်သတ်ပြီ (မိုးမခ) မေ ၁၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း မင်းထက်လူ Related posts ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ကြပါ … (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ လျှော်ကြမယ် ဖွပ်ကြမယ် (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ … (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ အဆင်ပြေတယ်မလား ဒါရိုက်တာကြီး (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ တကောင်တော့ရပြီ … (0)
ဒဂုန်တာရာ ၉၉ နှစ် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား အောင်ပန်းက ဂူဗိမာန်မှာ ကျင်းပ ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်) ၊ မိုးမခ၊ မေ ၁၁၊ ၂၀၁၈ (မေ ၁၀၊ အောင်ပန်းမြို့) ကဗျာဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၏ ၉၉ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အခမ်းအနား အောင်ပန်းမြို့ ရှိ ဒဂုန်တာရာဂူဗိမာန်ရှိရာ မယ်ခိုတောင်တွင် ကျင်းပပြုခဲ့ရာ မြန်မာပြည်အနှံ့က စာပေသမားများ၊ စာဖတ်ပရိသတ်များ၊ လူငယ်များ အလွှာစုံ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ပုံစာ- ကဗျာဆရာ ကလင့် (မန္တလေး)ကဗျာရွတ်ဆိုနေသည့်ပုံ ( ဓာတ်ပုံ – Min Thant MDY) ကဗျာဆရာ ကလင့် (မန္တလေး) ထောင် ၂ လချလိုက်ရတဲ့အပေါ် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သွားမယ် K (မိုးမခ) မေ ၁၁၊ ၂၀၁၈ မေလ ၆ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့ကျုံးဘေးမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ထိုးစစ်များရပ်ဆိုင်းရေးနဲ့ စစ်ဖြစ်ပွားရာ နယ်မြေများအတွင်း ပိတ်မိနေသော ပြည်သူများလွှတ်ပေးရေးအတွက် တောင်းဆိုပွဲတွင် စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ကဗျာရွတ် ဆိုခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ ကလင့်(မန္တလေး)ကို မနေ့က မေလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ငြိမ်းစုစီဥပဒေပုဒ်မ (၁၉) ဖြင့် ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်တရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ် ၂လ ချမှတ်လိုက်ခြင်းအပေါ် “ထက်မြက်သော ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာများ” က ကြေညာချက် တစောင်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ကဗျာဆရာကလင့်(မန္တလေး)ဟာ...
ရဲမှူးချုပ်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် သတင်းထောက်များကို လျှို့ဝှက်အက်နဲ့ဖမ်းဟု မိုးရန်နောင် ထွက်ဆို ထက်ခေါင်လင်း/Myanmar Now (မိုးမခ) မေ ၁၁၊ ၂၀၁၈ သတင်းထောက်များကို လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေဖြင့် အရေးယူရန် ညွှန်ကြားသူမှာ ရဲမှုးချုပ်တင်ကိုကို ဖြစ်ကြောင်း ဒုရဲမှုးဟောင်းမိုးရန်နို်င်ထွက်ဆို လိုက်သည်။ မေ ၉ ရက်နေ့က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကြားတွင် တွေ့ရသော ဒုရဲမှူးဟောင်း ဦးမိုးရန်နိုင် (ဓာတ်ပုံများ – ထက်ခေါင်လင်း/Myanmar Now) ရန်ကုန် — ရိုက်တာသတင်းထောက်များကို ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းခဲ့သည်ဟု တရားခွင်တွင် စွပ်စွဲခံရသော ရဲမှုးချုပ်တင်ကိုကိုသည် ထိုသတင်းထောက်တို့ကို ၁၉၂၃ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်ရန်လည်း အမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်း အကျဉ်းသားတစ်ဖြစ်လဲ ဒုရဲမှုးဟောင်းမိုးရန်နိုင်က မေ ၉ ရက်နေ့ တရားခွင်တွင် ထပ်မံထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ဒုရဲမှုးဟောင်းမိုးရန်နိုင်သည် အထက်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ရို်က်တာသတင်းထောက်ကိုဝလုံးနှင့် တွေ့ဆုံစကားပြောသည်ဟုဆိုကာ...
ရခိုင်အရေး ရင်မအေးရပါနှင့် မောင်မိုးသူ (ကုမုဒြာအွန်လိုင်း) မိုးမခ၊ မေ ၁၁၊ ၂၀၁၈ ရခိုင်ဒေသအရေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံအ တွက် နှစ်ပရိစ္ဆေဒ များစွာကပင် အဖြေမရှိတဲ့ ပဟေဠိပုစ္ဆာပမာ ရှုပ်ထွေးနက်နဲပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ ဆိုရာမှာလည်း ထိ လွယ် ရှလွယ် ပြဿနာအရပ်ရပ်နဲ့ ဖြစ်ပေါ် တည်ဆောက်ထားသည့်အတွက် ဖြေရှင်းရတာ ခက်ခဲမှုရှိသည်ကို တွေ့မြင်နေရပါ တယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုး ရ တက်လာပြီးသည့်နောက် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ကိုဖီအာနန် အမှူးပြုပြီး စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်း ကာ ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစီရင်ခံ စာ တင်သွင်းစေခဲ့ပါတယ်။ ကိုဖီအာနန် အမှူးပြုသော စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ တွင် နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်သည်ဆိုသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မကျေမနပ်သော လေသံတချို့ကိုလည်း ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ ရခိုင်ဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရိုး ရှင်းစွာ...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Eat my hat (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ မေ ၁၁၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
တိုးနှောင်မိုး – တိတ်ဆိတ်တာ တမျိုးလှတယ်
KT# တိတ်ဆိတ်တာ တမျိုးလှတယ် တိုးနှောင်မိုး (မိုးမခ) မေ ၁၀၊ ၂၀၁၈ မပြောလို့မပြီးတာထားတော့ဟုတ်ပါပြီ မတီးလို့တော့ ဘယ်လိုလုပ်မြည်ပါ့မလဲ။ ခွေးတောင်သားသမီးကိုအန်ကျွေးတယ် ခုတောပြာပုံတိုးတဲ့မြစ် ရွှံဖြစ်တာဘာဆန်းလည်း အိပ်မက်ဟာမှန်ထဲကအတိုင်း။ အရိုးခေါင်းကကျန်နေသေးတယ် ပိုင်ရှင်ကဘယ်ဘဝရောက်နေလည်း မိခင်ကသားကိုချစ်သလို။ အပြစ်အနာအဆာများတဲ့ပုံပြင်ဟာ လေထဲကူးနေတယ်။ စာအုပ်ကမုန်တိုင်းကိုပြန်ဖတ်လို့ ညစောင့်ကပေါင်မုန့်ကိုတမ်းတနေသလား အချစ်ရယ် ဝိုင်ရယ် မွေရပ်ဇာတိမရှိလို့ မရဘူး။ ဘဝတွေကူးခဲ့တာများလှပါပြီ အနေခက်ခက်အသေခက်ခက်ရုပ်နာမ်မး ကဗျာယုံလို့ ဆူးပုံနင်းတာမမှားဘူး မနက်ဖြန်မနက်မျက်နှာလေးသစ်ရရင်ပဲ ကျေနပ်နေပါပြီ။ ။ (26.4.2018) ကဗျာရေစီး-18 No tags for this post. Related posts No related posts.
ကဗျာစာအုပ် မိတ်ဆက် – သင်းရည်လွင် ၏ ရောင်စုံဘောလုံး
၁၉၉၀/ ၁၉၉၁ ကာလ မှစပြီး မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာ များစတင်ဖြတ်သန်းခဲ့သူကဗျာဆရာသင်းရည်လွင် ၏ ပထမဆုံး ကဗျာစာအုပ်။ စာပေစီစစ်ရေး စားပွဲပေါ်ကို ရင်တထိတ်ထိတ် ဖြတ်သန်းရင်း တိုးထွက်လာသော ခေတ်ထဲက ကဗျာတချို့နှင့် လက်ရှိ ဖြတ်သန်းနေသော ဘဝထဲမှကဗျာများ ပန်းသီကြိုးစာပေမှ
K ငြိမ်းချမ်း ● သူတို့ပြောတဲ့ ဒဂုန်တာရာ၊ သူတို့ပြောတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး – အပိုင်း (၂) (မိုးမခ) မေ ၁ဝ၊ ၂ဝ၈ မေလ ၁ဝ ရက်နေ့ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး ကဗျာဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ အသက် (၉၉) နှစ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ ဒဂုန်တာရာဟာ အသက် ၁၅ နှစ်ကစပြီး ကဗျာ၊ ဝတ္ထု၊ ဆောင်းပါးများ စာအုပ်ပေါင်းများစွာ ရေးသားခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းစစ်ကြာင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အစဉ်တောင်းဆိုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဒဂုန်တာရာဟာ ၁၉၁၉မေလ၁ဝရက်နေ့မှာ ကျိုက်လတ်၊ထိုင်ကူမြစ်တန်းရွာမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဒဂုန်တာရာ ကလောင် အမည် အပြင် မြိုင်သဇင်၊ မောင်နန်းနွယ်၊ စောတင်မူ၊ စောထွတ်၊ ဌေးမြိုင်၊ မောင်သစ္စာ၊ မောင်ဘတင့်၊ မောင်စ၊ ဗညား သီဟ၊ မောင်စိမ်းမြ၊...
၀ါရှင်တန်ဒီစီ မြန်မာသံရုံးဝက်ဆိုက်မှာ ဘစ်ကွိုင်းမိုင်းနင်းခိုးလုပ်နေတဲ့ သူလျိူဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တွေ့ခဲ့ဟု ဆို (မိုးမခ) မေ ၁၀၊ ၂၀၁၈ ယမန်နေ့က နိုင်ငံတကာသတင်းများအဆိုအရ (လင့်ခ်ဒီမှာ )- အမေရိကားက အစိုးရ၊ ကျောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းဝက်ဆိုက် ၄၀၀ လောက်မှာ ခရစ်တိုကာရင်စီလို့ခေါ်တဲ့ ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေး မိုင်းနင်းလုပ်တဲ့ သူလျိူဗိုင်းရပ်ပိုးတမျိုး ကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲသည်ဝက်ဆိုက်တွေကို drupal ဆိုတဲ့ ၀က်ဆိုက်အင်ဂျင်နဲ့ တည်ဆောက်ထားကြတာဖြစ်ပြီး အဲသည် drupal ရဲ့ ဗားရှင်းအဟောင်းတွေရဲ့ အားနည်းချက်တခုကနေ ဗိုင်းရပ်စ်က ခိုးဝင်ခဲ့တာ ဆိုပါတယ်။ အဲသည် သူလျိူပိုးဟာ အဲသည်ဝက်ဆိုက်တွေကို လာဖတ်တဲ့ ဧည့်သည်တွေရဲ့ ကွန်ပြူတာထဲကို ခိုးဝင်ပြီးတော့ အဲသည်ကွန်ပြူတာပါဝါကို သုံးပြီး ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို mining လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ တွက်ချက်မှုတွေ ပုိုင်ရှင်တွေ မသိအောင် run ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲသည်အကျိူးအမြတ်ကို သူလျိူဗိုင်းရပ်ပိုးထည့်သွင်းထားသူ...
​အိဏ်ဝေး ● ကြောက်​ရတဲ့ ကမ္ဘာ (မိုးမခ) မေ ၁၀၊ ၂၀၁၈ ကိုယ့်​အသက်​ရှူသံ​လေး​တွေ တစ်​ပါးသူဧရိယာထဲ ပြုတ်​ကျမသွားဖို့ မ​တော်​တဆဆိုပြီး ပြုတ်​ကျသွားတဲ့ အသက်​ရှူသံ​လေး​တွေ နင်း​ခြေမသွားကြဖို့ သားမှာ ပြာပြာနှံ့နှံ့ ဖြစ်​နေရပါတယ်​ အ​မေ…။ ကမ္ဘာကြီးဆိုတာ လုံးတယ်​တဲ့ အ​မေရဲ့ ​နောက်​ပြီး တိမ်း​စောင်း​နေပြန်​သတဲ့ အ​မေ။ ​သားဟာ အ​စောင်းဘက်​မှာများ လူလာဖြစ်​မိပြီလား အ​မေ။ အ​ပေါ်ကို ​မော့​မော့ကြည့်​ပြီး အသက်​ရှူသံ​တွေကို ချုပ်​တည်း​နေရတယ်​။ တခါတခါဆို ကိုယ်​လိုသူလိုမှ ဟုတ်​ရဲ့လားလို့ ကိုယ့်​အရိပ်​ကို ပြန်​ငုံ့ကြည့်​မိတယ်​။ အ​မေရယ်​ … သူတို့​တွေ ​တောက်​တချက်​​ခေါက်​တိုင်းသာ သားဘဝ မီးဟုန်းဟုန်း​တောက်​ပြရမယ်​ဆိုရင်​ အ​မေ့ မီးဖိုခန်းထဲမှာ သားရဲ့ အပိုင်းအစ​တွေပဲ ဖြစ်​လိမ့်​မယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့… အ​မေ အ​မေ့နို့ရည်​ထဲမှာ ခံနိုင်​ရည်​​တွေပါတာ သားအခု​တော့...
ခင်မောင်စော (ဘာလင်) ● လူတော်လူကောင်းလော၊ သူတော်ကောင်းကြီးလော (မိုးမခ) မေ ၁၀၊ ၂၀၁၈ တခါက အနောက်တိုင်းသားတယောက်ရှိခဲ့ဘူးသည်။ ထိုသူက ထူးဆန်း၏။ ဆေးလိပ်မသောက်၊ အရက်မသောက်ပေ။ သူတို့ပြည်တွင် ရေလိုသောက်နေသော ဘီယာကိုပင် ပွဲလမ်းရှိမှ တခွက်၊ နှစ်ခွက်လောက်ပဲ သောက်တတ်သည်။ ကလေး များကို ချစ်တတ်သည်ဟု အဆိုရှိသည်။ တိရစ္ဆန်များအား သနားကြင်နာသည်ဆိုပြီး သက်သတ်လွတ်စား၏။ အနုပညာလည်း ဝါသနာပါပြီး ပန်းချီဆရာလုပ်ချင်သည်။ မိန်းမကိစ္စလည်း မရှုပ်ပါ။ တသက်လုံးတွင် အများဆုံး ရည်းစားသုံးယောက်သာရှိခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးရည်းစားကို လက်ထပ်ယူခဲ့သည်။ ကိုယ့်မွေးရာဇာတိနိုင်ငံမှာ လူရာမဝင်ဘဲ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမှာ ကြီးပွားသွားသည်။ ကြီးပွားသည်ဆိုရာ၌ ဝန်ကြီးချုပ်တက်ဖြစ်၊ နောက်ပိုင်း သမတအထိ ဖြစ်သည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံသားများက သူ့ကိုကြည်ညိုလိုက်ပုံများကတော့ သူ့ကို အတင်းနိုင်ငံသား ပေးပြီး သုံးလအတွင်း...
Page3of 896«12345...896»
>Maung Swan Yi - 75th birthday of Tin Moe
Aung Din - Burma's Parliament Watch Part 25
>Electricity in Mawlamyine cut off again before the exam
>some words for Guru
အောင်ငြိမ်းချမ်း၊ ဝင်းနန္ဒာ/Myanmar Now ● ဘုန်းကြီးကျောင်း ငရဲခန်းမှာ လပေါင်းများစွာ https://t.co/TugPveIht3 https://t.co/tBsewScZmI about 54 minutes ago ReplyRetweetFavorite